Senior Account Archives - Glory Assumption Space
Any 3D Designer A/R Accountant A/S SHE&Q Executive A/S SHE&Q Officer A&P Supervisor Account Account & Finance Manager Account Manager Accountant Accountant ( AP/AR) Accountant Manager Accountant Supervisor Accounting Admin / HR Executive Admin / Human Resources Admin & Accountant Supervisor (Breeder Farm) Admin & HR Admin & HR Assistant Manager Admin & HR Manager Admin & HR Officer Admin & HR Supervisor Admin Account Admin Assistant Admin Assistant Manager Admin Coordinator Admin Executive Admin HR Manager Admin Manager Admin Officer Admin Secretary Admin Staff Admin Supervisor Admin Supervisor (or) Executive Advertising & Market Analysis Manager Advertising And Branding Manager Advertising Manager Aesthetic Assistant Aesthetic Assistant ( ဆရာဝန်အကူ) AGM (Admin &HR) AGM(Admin & HR ) Air Con Service Air Ticketing staff Android Developer Android Developers Announcer Aqua ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Architect Architecture Engineer Area Sales Manager Area Sales Manager (Admixture ) Area Sales Manager (Construction ) Area Sales Supervisor Artwork Graphic Designer Assistant Assistant Account Assistant Accountant Assistant Accountant Cashier Assistant Admin Manager Assistant Admin or Assistant Company Secretary Assistant Auditor Assistant Brand Manager Assistant Business Development Manager Assistant Chief Account Assistant Designer Assistant Engineer Assistant Finance Manager Assistant General Manager Assistant General Manager (Admin & HR) Assistant Graphic Designer Assistant HR Manager Assistant IT Manager Assistant Japanese Coordinator Assistant Key Account Manager Assistant Landscading Supervisor Assistant Logistic Manager Assistant Manager Assistant Marketing Manager Assistant Office Secretary Assistant Officer Assistant Operations Head Assistant Project Manager Assistant Purchaser Assistant Real Estate Manager Assistant Retail Manager Assistant Sales Assistant Sales & Marketing Manager Assistant Sales Manager Assistant Sales Manager (Modern Trade – FMCG ) Assistant Sales Representative Assistant Sales&Marketing Manager Assistant Store Manager Assistant to Director Assistant to GM ( Chinese or English ) Assistant to Technical Director Associate Engineer (Electrical Power) Associate Sales & Marketing Asst Channel Sales Manager Audit Audit Manager Auditor Auto Cad B2B Assistant Manager B2B Assistant Sales Manager B2B Manaer B2B Manager B2B Sales Executive B2B Staff Baby Sitter Backhoe Bakery Incharge Bancassurance Executive Bar Tender Barista BD Executive Beauty Advisor Beauty Trainer Bell Boy Boiler Branch Manager Branch Manager ( Mandalay ) Brand Executive Brand Manager Bridge Engineer Business Development Assistant Manager Business Development cum Operation Manager Business Development Executive Business Development Executive ( IT Solution ) Business Development Incharge Business Development Manager Business Development Manager/ Department Head ( Tender ) ( or ) Business Development Supervisor ( Tender ) Business Development Supervisor ( Tender ) Business Manager Business Relation Manager Business Unit Head Call Center car driver Cash Collector Cashier Cashier (Jr .Accountant) CCTV Install Center Coordinator Center Sales Manager Centre Manager Chef Chemical Engineer Chief Account Chief Accountant Chief Auditor Chief Engineer (M&E) Chief Engineering Chief Internal Auditor Chief Operations Officer Chief Technician Chinese & English Translator Chinese Sales Chinese Sales Supervisor Chinese Secretary Chinese Translator Chinese Translator (Sales) Civil Engineer Civil Engineer ( Road ) Civil QC Civil Technical Cleaner Client Service Manager clini supervisor Clinic Supervisor Coffee Shop Manager Cold Store Supervisor Communication Executive Computer Operator Computer Staffs Construction Coordinator Content Writer Contract Manager CPA Crane Car Driver Crane Operator Creative Designer Credit Controller Customer Care Assistant Customer Care Manager Customer Care Service Customer Care Staff Customer Clearance Customer Service Customer Service ( Chinese ) Customer Service ( English ) Customer Service & Order Processing Staff Customer Service Assistant Customer Service Coordinator Data Collector Data Entry Data Entry Staff ( Procurement ) Day Security Delievery Vehicle Incharge delivery Delivery Drive Delivery Incharge Delivery Staff Delivery Supervisor Deputy Chief Account Deputy Chief Engineer (Fiber Network) Deputy HR Manager Deputy Sale Director Deputy Supervisor Designer Di- Monitor Cum Event Planner Digital Account Manager Digital Marketing Digital Marketing Assistant Digital Marketing Exective Digital Marketing Executive Digital Marketing Leader Digital Marketing Officer Digital Marketing Staff Distribution Sales & Marketing Distribution Staff Doctor Document Staff Domestic Tour Leader Dormitory In charges ( အဆောင်မှူး ) Downtown Sales Representative Drafter Driver Driver Helper Driving DTP DTP Staff Dy Finical Controller Dy Group Finance Director E - Commerce E - Marketing Education Elderly Care Teacher Electircal Technician Electric Marine Electric Marine Electrical & Mechanical Engineer Electrical Power Assistant Electrician Electronic Brand Manager Engineer Engineer Civil Engineer Designer Engineer Electrical Engineer Mechanical Engineer QS Engineer Site Engineer Supervisor Engineering Engineering (Technician - Mechanical/ Electrical English Translater EP Engineer Esimater Event Management Event Management Executive Event Planner Event Supervisor Events Activation Executive Executive Account Executive Auditor Executive Director Executive Engineer Executive Procurement Executive Secretary Expenses Accountant Export / Import Staff Export & Import Senior Staff Export Assistant Manager Export Import Executive Export Import Supervisor Export/Import Assistant External Relation F & B Manager F & B Supervisor Factory Helper Factory Manager Factory Supervisor factory workers Fashion Designer Field Activation Staff Finance & Accountant Finance Assistant Manager Finance Controller Finance Executive Finance Executive ( Finance & Account Department) Finance Manager Finance Staff Financial Controller Finishing Manager Fixed Assets Controller Food Technician Football News Assistant Editor Foreman Forklift Operator Forklift Service France Interpreter Front Office Staff Front Office Supervisor Game Master garden Gardener Garment Store Staff General Account General Manager General Operation Staff General Worker General Worker (or) Helper GM Graphic Designer GYM Instructor Gym Instrutor Head Accontant Head Chef Head Of Marketing Cum Marketing Manager (Lubricant) Head of Merchandiser Head of Sales and Marketing Head of Sales and Marketing Manager Head of Sales Manager For Automotive Field Head of Sales Manager For Fertilizer Field Head Waiter Helper Hotel ManagerံHotel Marketing Hotel Waiter Hotel Waitress House Maid Housekeeping Housekeeping Manager HR & Admin Executive HR & Admin Manager HR & Admin Supervisor HR Assistant HR Assistant & Supervisor HR Associate HR Executive HR Executive ( Garment Company ) HR Manager HR Officer HR Staff HR Supervisor HR Supervisor / Executive IELTS Trainer Import Coordinator Import Executive Import/Export & logistic cum documentation Coordinator Import/Export Manager Inbound Tour Manager Interior Decoration Interior Designer Internal Auditor International Air Ticketing International Relationship Manager Inventory Account Inventory Staff ISO Consultant IT / Software IT Assistant IT Center Engineer IT Coordinator IT Engineer IT Officer IT Staff IT Supervisor IT Technician IT Trainer Japan Teacher Japanese Coordinator Japanese Interpreter Japanese Teacher Japanese Translator Jewellery 3D Designer Jewellery 3D Graphic Designer Jewellery Drawing Jewellery Polishing Jewellery Sales Manager Jewellery Sales Supervisor Jr Phone Technicians Junior Accountant Junior Assistant Junior Auditor Junior Civil Site Engineer Junior Engineer Junior Loan Officer Junior Sales Supervisor Junior Shipping Staff Junior Site Engineer Junior Staff Key Account Assistant Manager Kitchen Helper Knowledge and Insights Manager Korea Interpreter Korea Translator l Lab Technician Labour Incharge Landscaping Law yer Lawyer Layer Leasing and Property Manager Leasing Manager Lighting Design/Electrical Engineer Line Manager Logistic Assistant Logistic Manager Logistic Staff Logistics Logistics Assistant (Driving) Logistics Executive Logistics Supervisor M & E Engineer M & E QC M & E Staff M &E Engineer M&E (Electrical) Engineer M&E Coordinator M&E Engineer M&E Engineer ( QS ) M&E Supervisor ( Building Maintaince) Machine Operator Madical Receptionist Maintaince Maintenance Engineer Maintenance Junior Technician Maintenance Manager Maintenance Supervisor Maintenance Technician Management Manager Management Trainee Manager Manager ( Hatchery ) manager assistant Manager Law Manufacturing Executive Manufacturing Manager Manufacturing Manager / Assistant Manager Manufacturing Technician Market Development Incharge Marketing Marketing & Customer Service Coordinator Marketing Assistance Marketing Assistant Supervisor Marketing Budget Analyst Marketing Engineer Marketing Executive Marketing Executive (or)Assistant Manager Marketing Leader Marketing Manager Marketing Manager (or)Marketing Assistant Manager Marketing Manager Assistant Marketing Media Staff Marketing Officer Marketing Resarch Marketing Staff Marketing Staff & Tele Marketing Staff Marketing Suprvisor Marketting Staff MD’s Secretary Mechanic Mechanic Engineer Mechanic Helper Mechanical Engineer Mechatronic Engineer Mechatronic Engineer Manager Media Marketing Executive Media Planner Medical Representative Merchanding Manager Merchandiser Merchandiser (Chinese) Merchandising Executive Merchandising Manager Micro Finance Assistant Manager Micro Finance Executive Micro Finance Manager Mining Mining Engineer MIS Executive MIS management information system Modern Trade Sales Modern Trade Sales Admin Modern Trade Sales Executive Modern Trade Supervisor Money Changer Staff National Sales Manager New Product Development Staff Night Duty Manager NSM Assistant (Assistant of National Sales Manager) Nurse Nutrition Advisor Nutritious Advisor Offfice Staff (HR & Admin) Office Admin Office Cashier Office Helper Office Manager Office Manager & Admin Manager Office Officer Office Secretary Office Staff Office Staff & Merchandiser Assistant Office Staff/Content Writer Online Marketing Operation Assistant Operation Engineer Operation Engineer (Building Maintaince Department ) Operation Executive Operation Manager Operation Manager Operation Staff Operation Supervisor Operator Operator ( စက်မောင်း ) Order Management Coordinator Organization Manager Outbound Tour Execuitive PA PA/Secretary Packaging Page Admin Pastery Commis Pastry Chef De Pastie Payment Collector Supervisor Payroll Officer Personal Assistant Personal Assistant & Secretary Personal Secretary Pet Care ( Supervisor ) Petro Supervisor PG Manager Pharmacist Phlebotomist Photographer photoshop Pick -up Truck Pick & Pack Staff Planning and Implemention Manager Plant Manager Playground Manager POS Operator Poultry Farm Technical Manager (Breeder Farm) Poultry Farm Technical Manager(Breeder Farm) Prime Mover/Truck Driver Procurement Procurement Assistant Procurement Executive Procurement Manager Procurement Manager / Department Head ( or ) Procurement Supervisor Procurement Specialist Procurement Supervisor Prodcut Supervisor Product Executive Product Manager Product Manager ( Chinese Language Product Manager Assistant Product Specialize Manager Production Production Engineer Production Executive Production Manager Production Manager / Department Head ( or ) Production Supervisor Production Material Control Production Staff Production Supervisor Programmer Project Coordinator Project Coordinator / Engineer Project Engineer Project Engineer/Project Manager Project Management Assistant Project Manager Project Manager(လမျးတံတား) Project Sales & Marketing Project Sales & Marketing Manager Project Sales & Marketing supervisor Project Sales Engineer For MGPS Promoter Girl Promotion Girl Promotion Staff Promotor Girl Property Manager Purchaser Purchaser ( Chinese ) Purchaser ( Chinese) Purchasing Manager /Assistant Manager Pv Service Installation QA Manager QA/QC Supervisor QC QC QC Engineer QC Inspector QC Manager QC Officer QC&QS Engineer QMR QS Civil Engineer QS Engineer QS Manager Quality Assurance Manager Quantity Survyer Real Estate Marketing Staff Reception Receptionist Regional Sales Manager Regional Sales Supervisor Regional Senior Sales Staff Reporter Research & Development Assistant Research&Development Assistant Reservation Executive Reservation Staff Restaurant Cashier Restaurant Manager Retail Checker Retail Leader Retail Supervisor RTA Staff Safety Safety Incharge Safety Officer Safety Supervisor Sale & Marketing Sale & Marketing Executive Sale & Marketing Supervisor Sale Admin Staff Sale Assistant Sale Promoter Sale Representative Sale Representative Manager Sale Staff Sales Sales - Executive Sales & Customer Service Sales & Distribution Manager Sales & Drawing Engineer Sales & Drive Sales & Marketing Sales & Marketing Assistant Sales & Marketing Executive Sales & Marketing Manager Sales & Marketing Manager / Department Head ( Pharma ) ( or ) Sales & Marketing Supervisor ( Pharma ) Sales & Marketing Officer Sales & Marketing Representative Sales & Marketing Staff Sales & Marketing Supervisor Sales & Marketing Supervisor ( Pharma ) Sales & Page Admin Sales & Service Representative (Chemical) Sales & Service Staff Sales & Service Supervisor Sales & Training Manager Sales Admin Sales Admin & Sales Account Sales Admin Executive Sales Admin Manager Sales Admin Supervisor Sales and Customer Service Executive Sales and Customer Services Sales and Marketing Assistant Manager Sales Assistant Manager Sales Coordinator Sales Drive Sales Engineer Sales Executive Sales Executive ( Automotive) Sales Executive ( Engine Oil Distribution ) Sales Executive ( For Real Estate Field ) Sales Executive (Freight Forwarding) Sales Executive (Painting) Sales Executive Manager Sales Executive(Chinese) Sales Girl Sales Leader Sales Leader Sales Man Sales Manager Sales Manager ( Real Estate ) Sales Manager (B2G) Sales Officer Sales Person Sales Planner Sales Planning Manager Sales Promotor Sales Reception Sales Receptionist Sales Representative Sales Representative/Merchandising Manager Sales Staff Sales Staff ( or ) Sales Man Sales Supervisor Sales Supervisor ( Downtown) Sales Supervisor Cum Chinese Translator Sales Support Sales Training Sales&Marking Manager Saloon Manager SAQ ( Site Hunter ) School Manager Secretary Secretary To Chairman Security Security Officer Security Supervisor Senior Senior A/C (Stock) Senior Account Senior Account (AR) Senior Accountant Senior Accountant ( AP) Senior Admin Manager Senior Auditor Senior Auto CAD Engineer Senior Brand Executive Senior Cashier Senior Civil Site Engineer Senior Department Senior Electrical Engineer Senior Engineer Senior Executive Senior Finance Executive Senior Finance Executive-Management Account Senior Loan Officer Senior Logistic Account Senior M&E Engineer Senior Manager Senior Manager ( Head Of Sales & Marketing ) Senior Marketing Executive Senior Marketing Manager (FMCG) Senior Marketing Staff Senior Operations Executive Senior Production Manager Senior Programmer Senior Purchaser Senior QS Senior QS Engineer Senior Quantily Surveyor Senior Reception Senior Sales Senior Sales & Customer Service Senior Sales & Marketing Senior Sales & Marketing Executive (Refrigeration) Senior Sales & Marketing Manager Senior Sales Executive Senior sales Representative Senior Sales Staff ( Modern Trade ) Senior Shipping Staff Senior Site Enginee Senior Store Keeper Senior Technician Senior Ticketing Senior Ticketing Executive Senior Web Developer Senior Web Developer/Web Developer For PHP CI-Frame Work Service Admin Service Adviser Service Advisor Service Coordinator Service Engineer Service Manager Service Representative Service Technician Shipping Coordinator Shipping Manager Shipping Staff Shipping Supervisor Shop In-charge Shop Manager Shop Supervisor Showroom Manager Showroom Manager Assistant Showroom Manager Associate Showroom Sale Cum Sales Coordinator Showroom Sales Showroom Sales Executive Showroom Staff Showroom Supervisor Site Accountant Site Admin Site Engineer Site Engineer ( Telecom ) Site Manager Site Staff Site Store Site Storekeeper Site Supervisor Social Media Expert Social Media Manager Software Devloper Sourcing(Purchaser) SPA Supervisor Spare - parts Supervsior Spare Part Manager Sr Associate Engineer Sr Phone Technicians Sr.Associate Engineer Sr.Veterinarian (Breeder Farm) Srote Staff Station Manager / Assistant Manager / Supervisor ( For Petrol Station ) Stevedore/ Warehouse Operative Stewarding Team Leader Stock Account Stock Controller Stock Controller Accountant Store Account Store Accountant Store Assiatant Store Inchareg Store Incharge store Keeper Store Manager Store Staff Store Supervisor Storekeeper for Warehouse Structure Engineer Sub Assistant Engineer Supervisor Supervisor ( Electrical & Mechanical ) Supervisor (for Petrol Station) Supervisor (စက်လိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး) Supply Chain Supply Chain Manager Surveyor Swine System Analysis Teacher Technical Sales Representative Technical Support Technician (Electrical) Technician Tele Marketer Tele Marketing Staff Tele Sales Telemarketer Tender Tender Manager Tender QS Tender Specialists Test Engineer Thai Translator Thuwunna Ticketing Executive Ticketing Staff Tour Inbound & Outbound Operation Manager Tour Leader Tour Manager Tour Operation Manager Tour Operator Tour Operator Executive Tour Reservation Tower Installation Tower Installation Coordinator Tower Installation Engineer Trade & Investment Manager Trade Marketing Assistant Trade Marketing Manager Trade Marketing Representative Trade Marketing Supervisor Traffic Conto Traffic Control Trainer Training Inspector Training Manager Translator Translator Chinese Translator English Transport Supervisor Travel & Tour Manager Trip Sales Vehicle Vehicle Assistant Vehicle Officer Vehicle Supervisor Vice Business Development and Marketing Manager Video Editor Video Journalist Visa Assistant Visa Operator Visa Passport Voucher Staff Waiter Waiter & Waitress Waiter Leader waiter/waiteress Waitress Warehouse Warehouse Accountant Warehouse Controller Warehouse Helper Warehouse Leader Warehouse Manager Warehouse Store Staff Warehouse Storekeeper Warehouse Supervisor Water Treatment Maker Web Desinger Welder Welder Engineer Whole Marketing Supervisor Whole Sales Supervisor ကားဝါယာရိန်းကျွမ်းကျင်သူ ကားဘော်ဒီကျွမ်းကျင်သူ ကားဘော်ဒီဆေးမှုတ်ကျွမ်းကျင်သူ ကွန်ပျူတာစာရင်းကိုင် ကွန်ပျူတာပန်းထိုး ကျွမ်းကျင်လုပ်သား စက်ပြင် စာတိုက်မန်နေဂျာ စားဖိုမှုး စားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာ စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ခံ ဆိုင်ခွဲစစ်ဆေးရေး ဆိုင်တာဝန်ခံ တွဲဖက်ဆိုင်တာဝန်ခံ နူတ်ခမ်းအရောင်သွင်းတက်တူးထိုးနိုင်သူ ပစ္စည်းပို့ ကယ်ရီသမား မှန်အလုပ်သမား မှန်အလုပ်သျမား ယာဉ်ကြီး စက်ပြင်ဆရာ ရိုးရိုးသူနာပြု ရုံးအဖွဲ့ မှူး ရုံးအုပ် လက်သမား လှိုင်သာယာစက်မှု့ဇုန် ။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း အထက်တန်းသူနာပြု အိမ်တွင်းအလှဆင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အရောင်းဝန်ထမ်း အကြော်အလှော်ကျွမ်းကျင်ီDriver မော်တော်ယာဉ်မုး(Data Entry) မော်တော်ယာဉ်မှူး သွေးဖောက်ကျွမ်းကျင်ဲJapan Teacherံ်ုHostessှSales and Customer Servicesှstore KeeperျWarehouse Accountant
Any $ 450 00 000 000 - 1 000 - 10 000 - 350 000 - 400 000 - 450 000 - 500 000 ~ 450 000 ~ 600 000-15 000-300 000-700 1 10 100,000 - 300,000 100000 100000 - 150000 1000000 1000000 - 2000000 1000000 above 1000000-1500000 10000000-15000000 12 120000 120000 - 130000 120000-150000 1200000 130000 130000 - 250000 130000 - 500000 135000 140000 150 150000 150000 - 180000 150000 - 250000 150000 - 400000 150000 ~ 200000 1500000 1500000 - 2000000 160000 165000 170000 175 175000 180000 180000 ~ 200000 1800000 190000 200000 200000 - 300000 200000 - 350000 200000 - 400000 200000 - 500000 200000-250000 2000000 20000000 220 230000 250 250000 250000 - 400000 250000 - 500000 250000 ~ 450000 250000-300000 250000-500000 2500000 280000 300 300,000 - 500,000 300000 300000 - 350000 300000 - 400000 300000 - 450000 300000-500000 300000-600000 330000 350 350000 350000 - 400000 350000 - 500000 380000 400 400000 400000 - 450000 400000 - 500000 400000 - 600000 400000-700000 450000 450000 ~ 500000 500 500,000 - 700,000 500000 500000 - 1000000 500000 - 800000 500000 - 900000 500000 ~ 600000 500000 ~ 700000 550000 600000 600000 - 650000 600000 - 700000 600000 - 800000 600000 - 900000 600000-1000000 600000-700000 650000 700,000 - 1,000,000 700000 700000 - 800000 700000 - 900000 80 800 80000 80000 - 200000 800000 800000 - 1000000 800000 - 1500000 800000 Above 85000 90000 900000 900000-1000000 Above $450 Above 1000000 Above 150000 Above 1500000 Above 200000 Above 2000000 Above 250000 Above 300000 above 350000 Above 400000 above 450000 Above 500000 Above 600000 Above 700000 above 900000 Above USD 200 Above USD 500 less than 100,000 Nego Negotiable NG Ngeo US 800 to US 1000 USD 200 -500 USD 700 Above USD 800 USD1000-USD 15000
Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မှော်ဘီမြို့နယ်
Location in : Hmawbi
Salary Rang : 500000 - 800000
Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မှော်ဘီမြို့နယ် ။ • At least5years of progressive experience in Accounting , Financial Analysis or Financial Reporting required • Bcom , ACCA ( or ) CPA preferred • Have knowledge of ERP ( or ) SAP system and other relevant accounting system • Mature candidate ( Under 35 years ) • Exposure to manufacturing organization and standard costing systems • Experiences with foreign currencies and grants management preferred • Have experience in managing bookkeeping , accounting payable & receivable and general ledger reconciliation ,AP , AR , Tax , TREASURY Management skill • Strong knowledge of local and international banks policy , procedure and process • Have knowledge of Develop , implement and maintain system ,procedures and policies including account payable function to ensure adherence to company guidelines • Strong knowledge of monthly closing of financial records and posting of month end information ensures the accuracy of financial statements • Strong knowledge of tax auditing and tax calculation process • Ability to priorities and work well under pressure • Good communication in English , preferred Chinese Language • Skillful in the use of computer software and Microsoft Office Packages , particularly word , excel ,power point and outlook • Office Hours 9:30 AM to 5:30 PM • Saturday Half , Sunday and Public Holiday Off • Meal & Ferry Provide • မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေသန့် Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေသန့် Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Bcom , BAct ( သို့ ) မည်သည့် ဘွဲ့ရမဆိုလျှောက်ထားနိုင်သည် ။ • LCCI level (3) ( UK ) ပြီးထားသူဖြစ်ရမည် ။ • Manufacturing ပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Accountant – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အင်းစိန်မြို့နယ်
Salary Rang : 700000 - 800000
Senior Accountant – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အင်းစိန်မြို့နယ် ။ • Age between 25 to 40. • Any Bachelor Degree with LCCI Level III, ACCA Part II or Accounting Diploma. • Must have good communication and interpersonal skills. • A good team player and can lead Junior accountants. • Highly accuracy skill is required. • Must have about5years or above working experience in relative field. • Must have about3years in related position service. • Proficiency in Microsoft Excel, Word and Accounting Software. • Office Hours 8:30 AM to 5:00 PM • Sunday and Public Holiday Off • အင်းစိန်မြို့နယ် ရှိ Cement Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အင်းစိန်မြို့နယ် ရှိ Cement Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 - 977397705 , 09 263121101 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 ,09 263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ • Bcom ( သို့ ) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • ACCA Part ( 1 ) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည် ။ • Senior Account ရာထူးဖြင့် အတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Accounting Software အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Senior Account ရာထူးဖြင့် အတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိကြောင်းအထောက်အထားပြနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်သုတ်ဆေး ကုမ္ပဏီ ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်သုတ်ဆေး ကုမ္ပဏီ ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 - 977397705 , 09 263121101 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 ,09 263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်
Senior Account – Female (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ။ • B Com (သို့) Any Graduate LCCI Level3အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၃၅ - ၄၀)နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ • Financial Accounting ပိုင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ • Senior Account ဖြင့် လုပ်သက် (၄)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ • စာရင်းဇယားနိုင်နင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 6:00 PM) • တနင်္ဂနွေနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများသာ ပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့် ဂတ်(စ်)အိုးများ ဖြန့်ချီသော Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့် ဂတ်(စ်)အိုးများ ဖြန့်ချီသော Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_7219" align="alignnone" width="509"] Beautiful businesswoman sit at workplace in office[/caption]
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗဟန်းမြို့နယ်
Salary Rang : 600000 - 700000
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဗဟန်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည် ။ • ACCA Part ( 1 ) ( သို့ ) CPA Part ( 1 ) တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၆း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်သည် ။ • ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Construction Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female (5) Post / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် (ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်)
Salary Rang : 400000 - 450000
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Senior Account – Female (5) Post / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် (ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်) ။ •	B Com (သို့) Any Graduate & LCCI Level3အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	Senior Account ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ •	Computer Word , Excel ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Accounting နှင့်ပတ်သက်သော Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00 PM ) •	ဖယ်ရီမရှိပါ ။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ •	ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူများဦးစားပေးပါမည်။ •	လှိုင်သာယာမြို့နယ် (ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်)ရှိ Plastic စက်ရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ် (ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်)ရှိ Plastic စက်ရုံကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Salary Rang : 500000 ~ 700000
၁) Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ရန်ကင်းမြို့နယ်။ • Construction တွင် Senior Accountant ရာထူးဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (3) UK အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • ACCA Part2တက်ရောက်နေသူများဦးစားပေးမည်။ • Accounting ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • English (4) Skills ကိုကျွမ်းကျင်ရမည်။ • ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွေ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီးတွေ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Location in : Dagon
၁) Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဒဂုံမြို့နယ် ( မြို့ထဲ )။ • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၂၅ - ၃၅) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • Accounting နှင့်ပတ်သက်သည့် Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • Trading/Distribution နယ်ပယ်မှ ဖြစ်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အအစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီခွဲအထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • ဒဂုံမြို့နယ်(မြို့ထဲ)တွင်ရှိသောဗလာစာအုပ်များထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ သည့်ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒဂုံမြို့နယ်(မြို့ထဲ)တွင် ရှိသောဗလာစာအုပ်များထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Salary Rang : 500000 ~ 600000
၁)Senior Accountant – Female - (5) Posts/လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၄) နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။ • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • စားသောက်ကုန်ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ • ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Accounting နှင့်ပတ်သက်သည့် Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပ်ိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Location in : စမ်းချောင်း
၁)Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • Senior Account Position ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။ • LCCI Level3/ ACCA ( Part -2 ) ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ကန့်သတ်မထားပါ ။ • Strong ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေနေ့တစ်ဝက် ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Hotelတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Hotel တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁)Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • Bcom/DA/Becon/B.A (Eco) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • MYOB (or) Accounting Software လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်နှင့် ( ၃၅ ) ကြားဖြစ်ရမည်။ • အရှုံး၊အမြတ် စာရင်းဆွဲနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောသေင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဆေးရုံးသုံးပစ္စည်းများဖြန့်ချီသည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁)Senior Accountant - Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • Bcom/DA/Becon/B.A (Eco) ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • LCCI Level (3) အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • MYOB (or) Accounting Software လက်မှတ်ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်နှင့် ( ၃၅ ) ကြားဖြစ်ရမည်။ • အရှုံး၊အမြတ် စာရင်းဆွဲနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) နာရီမှ ညနေ ( ၅ ) နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောသေင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဆေးရုံးသုံးပစ္စည်းများဖြန့်ချီသည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2818" align="alignnone" width="636"] Asian female accountant or banker making calculations. Savings, finances and economy concept throughalaptop.; Shutterstock ID 560877814[/caption]
1) Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ • Senior Account Position ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည် ။ • LCCI Level3/ ACCA ( Part -2 ) ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ကန့်သတ်မထားပါ ။ • Strong ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေနေ့တစ်ဝက် ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Hotel တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀( ညှိနှိုင်း ) / သုဝဏ္ဏမြို့နယ်
Location in : Thuwana
၁) Senior Account – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၅၀,၀၀၀( ညှိနှိုင်း ) / သုဝဏ္ဏမြို့နယ် ။ • Construction ပိုင်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • Bcom ဘွဲ့ရ ( သို့မဟုတ် ) CPA တကနေသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၅ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သုဝဏ္ဏမြို့နယ်တွင်ရှိသော Construction Company ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )